Madda Walaabuu Press: Dhaamsa Waggaa Haaraa HD-GS-ABO
Hundeen rakkoo ummatoota Itophiyaa, rakkoo siyaasaa dhuma jaarraa 19ffaa irraa eegalee gan- galataa dhufe tahuu haaluun hin danda’amu. Sirni jaarraa kana irraa jalqabee Itophiyaa irratti diriirfame, sabaa fi sab-lammoota biyyattii kan biyya isaanii weeraree qabatuun mirga isaanii ol aanaa sarbe, moggeessee fi sabummaan xiqqeesse, cunqursaa siyaasaa fi saamicha dinagdee kan tarkaanfachiisu tahuu irraa biyyattii nagaa fi tasgabbii dhorkate. Mirgi eenyummaa sarbamee, dhimma biyyaa fi matayyaa irratti murteessaa tahuu hanqatuu, mirga-dhablummaan ajajamaa tahanii jiraatuuf dirqamuun hundee rakkoo siyaasaa Itophiyaa ti. Haa tahu malee ummatootni Itophiyaa sirnoota humnaan irratti of irroomsuun isaan bitaa turanii fi jiran kanneeniif yeroon itti jilbeenfatanii bulan akka hin turre irra deebiin yaadachisuu baraabaachisa. Yeroo adda addaatti bakkoota gara garaatti qabsoo hadhaawaa gochaa diddaa isaanii agarsiisaa turan.
ABOn mooraa qabsoo tasgabbeessuutti dabalee humna isaa jabeessuuf tarkaanfii bara kana fudhataa tureen WBO aynaa fi baay’inaan guddisuu danda’uun dhaamsa gammachuu diina rifaasisuu fi ummata keenya gammachiisu dha. Tarkaanfiin Waraanni Bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhataa ture hanga ummatni keenya barbaadu tahuu hanqatullee kan diinatti mataa dhukkubbii tahee fi shoorarkeesse tahuun waan eenyu illee haaluu danda’u miti. Ummatni keenya falmaa jihaa kanaan godhamu caalaatti yoo nu tinnise kana caalaa ol guddiisuuf haala aanjaa kan durii caalaatu diriirfamee jira.
Falmaa ummatni keenya godhaa jiruu fi addatti ammoo falmaa dargaggotni Oromoo miliyoonotaan humna isaanii tokkoomsanii akka dungootti baqaa qabsoo itti fufiinsaan wag- goota 14 darban godhaa bahan keessatti gumaachi ABO sadarkaa ol’aanaa kan qabu tahu illee murannnoo fi bilchinni jarmyaa dargaggootaa kan qooda daran ol aanaa qabuu fi seenaa qabsoo ummata Oromoo keessatti bakka addaa kabajamaa qabu tahuu ABO hunda hubachiisuu fedha. Ummatni Oromoo ilmaan isaa qaroo fi gootota kanatti kan boonuu qabu tahuu hubachiisaa qabsoo hadhaawaa bobaa diinaa jala ta’anii qoma isaanii rasaasa diinaaf kennaa jiraniif deggarsa of qusatnaa hin qabneen akka bira dhaabbatan ABO gadi jabeessee dhaama. Dargaggootni keenyas jarmyaa fi muuxannoo qabsoo argatan daran jabeeffataa sadarkaa ol’aanaa falmaa bilisummaaf godhamuutti akka ol guddisaa deeman gadi jabeessee hubachisa. Kanuma waliin diinaa fi farreen jarmyaa isaanii fi qabsaawota Qeerroo harka keessa galfatuun facaasuuf tattaaffii irra deddeebiin godhaniif, cufaa tahuudhaan jarmayaa isaanii akka qaroo ija isaaniitti akka tikfatan yaadachiisa.
Diinni ummata Oromoo humnaan bitaa jiru, ummata Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuu irraa of duuba kan hin jenne tahuu gochaa raawwatuu fi karoora baafatuun agarsiisaa jira. Waan taheef miseensoti ABO biyya keessaa fi alaa marti yeroon amma keessa jirru murteessaa tahuu hubattanii Qabsoo Bilisummaa itti jirtan hifannaa tokko malee dachaa dachaan guddisuun bittaa mootummaa farra ummatootaatti xumura akka itti goonu waamicha kiyya dabarsa. Ofii keenyaa akka shaamaa baqnee dhumnee mirgi ummata keenyaa kabajamuu akka qabu murtii keenya akka tahu gadi jabeesseen hubachiisa. Mootummaa kanatti xumura itti goonu malee ummatni keneya mirga isaa argatuun kan hin abjootamne waan taheef xumura itti gochuun murtii keenya tahuu hundi akka hubatu.